Space Zoom သည် Samsung Galaxy S11 အတွက် "လျှို့ဝှက်လက်နက်" ဖြစ်သည် Androidsis
Space Zoom သည် Samsung Galaxy S11 အတွက်“ လျှို့ဝှက်လက်နက်” ဖြစ်သည်
အဲဒီအကြောင်းကြားဖူးလား Spatial zoom ကို? ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါတို့လည်းမလုပ်ဘူး။ သူ့နာမည်ကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားမိရင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါတယ် အလွန်အစွမ်းထက် zoom ကို။ ထိုအမှုအရာသည်မှာအားလုံးမှားမသွားကြသည်ပုံရသည်။ ဒီဟာကဘာလဲဆိုတာငါတို့သိပြီ Samsung မှတ်ပုံတင်ထားသောနောက်ဆုံးပေါ် "ကုန်အမှတ်တံဆိပ်" တစ်ခု။
မကြာသေးမီကစမတ်ဖုန်းပစ်လွှတ်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မြင်နေကြသနည်း ကင်မရာအပိုင်းသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်။ ကုမ္ပဏီအားလုံးကစျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကင်မရာဖြင့်ဖုန်းကိုကိုင်ဆောင်ထားရန်တိုက်ပွဲဝင်ကြသည်။ ထိုပုံရသည် ချုံ့ချဲ့ပြောစရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။
1 Space Zoom, လာမည့် Galaxy S11 အတွက်အသစ်ဖြစ်သည်
Space Zoom, လာမည့် Galaxy S11 အတွက်အသစ်ဖြစ်သည်
Space ကိုချဲ့အင်္ဂလိပ်လို အသစ်သောလက်နက်တစ်ခု Samsung နှင့်အတူအကြီးမားဆုံးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည်သည့်အတူ။ အခြားကုမ္ပဏီများထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးကိုဖန်တီးရန်ထုတ်လုပ်သူများသည်ပြည်သူလူထု၏အာရုံကိုရယူရန်ကြိုးစားသည်။ အောင်မြင်မှုအတော်များများဟာကောင်းမွန်တဲ့ကြော်ငြာလှုံ့ဆော်ရေးတခုအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ အမှန်တရားကတော့အဲဒါပဲ ရုံနာမကိုအမှီspatial zoom ကို ya ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရဖို့နိုင်ခဲ့သည်.
ဒါပေမယ့် Spatial Zoom ဆိုတာဘာလဲ။ ယခုအထိကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးတိကျသောနည်းလမ်းဖြင့်အနည်းငယ်သာသိသည်။ ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်ပါတယ် Samsung သည်ပေါင်းစပ်။ ရသောကင်မရာဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် အများဆုံးထိရောက်လမ်းအတွက်အစွမ်းထက် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အတူ optical zoom ကို.
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ခန့်က Xiaomi မိသားစုဝင်အသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့သည်။ Mi Note 10 အသစ်တွင်ကင်မရာငါးလုံးနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည် အဆိုပါရောက်ရှိကြောင်းအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ ၁၃ Megapixels ။ မကြာသေးမီကမတွေးနိုင်လောက်သောပုံများ။ megapixel အတွက် resolution ကန့်သတ်သည်အဘယ်မှာရှိ စမတ်ဖုန်းအတွက်လား။ ယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်မရှိသေးဟုထင်ရသည်။ သို့သော်တိုးတက်မှုသည်မည်မျှပိုများလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်ရေးအမည်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသာသိသည်။ အာကာသဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းရှိပါသလား။ ထိုနေ့၏ Huawei P30 Pro ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကင်မရာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ မဟာဗျူဟာပေါင်းစပ်မှုဖြင့်၎င်း၏5optical zoom တိုးမြှင့်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဓာတ်ပုံများပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းများ၏ကင်မရာများသည်အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးကြသည်။ ကင်မရာတွေထက်တိုးတက်မှုအတွက်နေရာအများကြီးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်မဟုတ်လား။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကင်မရာများရရှိရန်အလုပ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်လျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွင်တိုးတက်ရန်များစွာရှိသေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Space Zoom သည် Samsung Galaxy S11 အတွက်“ လျှို့ဝှက်လက်နက်” ဖြစ်သည်